Zava-misy COVID vaovao rehefa mandositra any Etazonia 20 taona any amin'ny fonja federaly noho ny fanararaotana na fanararaotana sarontava amin'ny sarontava
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Zava-misy COVID vaovao rehefa mandositra any Etazonia 20 taona any amin'ny fonja federaly noho ny fanararaotana na fanararaotana sarontava amin'ny sarontava
Airlines • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • fanorenana • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Araka ny filazan'ny FAA, tatitra momba ny mpandeha tsy mihetsika 4,385 no napetraka tao anatin'ny herintaona tany Etazonia. Amin'izany dia 3,199 no tatitra momba ny zava-niseho mifandraika amin'ny sarontava. Ny fitsabahana amin'ny ekipa mpandeha dia heloka bevava lehibe, saingy tokony ho heloka bevava ve izany amin'ny lalàna Patriot izay misy fe-potoana 20 taona an-tranomaizina? Tsy izany no eritreritry ny filohan'ny Flyers Rights amerikana Paul Hudson.
Aza hadino ny fisalasalana ara-tsosialy rehefa mitaingina sidina anatiny any Etazonia.
Ireo mpandeha manohitra ny lalàna misy ankehitriny ary mikiakiaka mandritra ny sidina dia mety henjehin'ny lalàna momba ny Partriot miatrika 20 taona an-tranomaizina federaly.
Ny mpikarakara ny sidina amerikana dia ampiofanin'ireo olona nampiofana mpiambina fonja ihany - tsy dia hoe fanandramana fanalefahana fotsiny.
Ny lanitra mahafinaritra any Etazonia dia mety tsy ho sariaka velively tahaka ny tamin'ny fotoan'ny PAN AM taloha.
Federal Air Marshals dia mampianatra ny mpanamory sidina ny fomba hiatrehana ny fitomboan'ny risika ateraky ny mpandeha izay lasa mahery setra sy mahery setra, matetika noho ny lalànan'ny sarontava.
Ny fameperana izay matetika ampiharina amin'ny sidina iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny seza afovoany misokatra, ny halavirana ara-tsosialy amin'ny fiaramanidina, ary ny fitsipiky ny fanaovana vaksiny, dia matetika tsy manan-kery ho an'ny sidina an-trano amerikana.
Mpandeha an-trano maro any Etazonia no mandà ny hanaraka ny fitsipiky ny fanaovana sarontava noho ny antony ara-politika, ara-pinoana, ary ny sasany noho ny antony ara-pahasalamana. Mahatonga tranga maro izany, izay notaterin'ny Federal Aviation Authority (FAA)
Ny manidina amin'ny taonan'ny COVID-19 dia manahirana ny mpandeha sy ny ekipa, ary niteraka trangan-javatra mifandray amin'ny sarontava miisa 3,199 notaterina tamin'ny FAA. Raha jerena ny tatitra momba ny mpandeha tsy mihetsika 4,385 fotsiny izay napetraka tao anatin'ny herintaona, isa be io.
Mba hifehezana ny mpandeha dia resahina ao amin'ny trano ny fanasaziana ireo trangan-javatra mifandraika amin'ny mpandeha amin'ny fahatratrarana an-keriny. Napetraka tany Etazonia ny lalàna momba ny Tia Tanindrazana ho valin'ny fanafihana fampihorohoroana fa tsy valin'ny mpandeha iray nitaraina. Ny fanitsakitsahana ny lalàna momba ny Tia Tanindrazana dia misy sazy mihatra 20 taona an-tranomaizina.
Paul Hudson, Filohan'ny Zon'ny Flyers, efa an mpisolovava miteny ho an'ny zon'ny mpandeha ary milaza fa ampy izay.
Fanehoan-kevitra avy amin'ny FlyersRights.org ho an'ny Komity Aviation House momba ny fitomboan'ny isan'ny sidina fiaramanidina
Ny fitomboan'ny tranga mahery vaika tato ho ato amin'ny dia an'habakabaka dia olana lehibe mila vahaolana. Ny fihainoana ny hevitry ny mpandeha dia mety hahazo tombony amin'ny fihainoana ny kaomity. FlyersRights.org dia nametraka fanangonan-tsonia iray amin'ny departemantan'ny fitaterana tamin'ny volana aogositra 2020 mba hanomezana alàlana ny fanaovana sarontava amin'ny dia an-dranomasina. FlyersRights.org no orinasa nisesy niaro ny fepetra fanalefahana COVID mba hahatonga ny fitsangatsanganan'ny rivotra ho azo antoka kokoa.
Raha ny angom-baovao FAA farany teo, ny tranga voalaza fa mifandray amin'ny sarontava dia mitaky 73% amin'ny tranga rehetra notaterin'ny mpiasa an-tsambo tamin'ny 2021. Mandritra izany fotoana izany dia mihena ny trangam-pifandraisana tsy misaron-tava, ary ny FAA dia avo roa heny noho ny isan'ny fanadihadiana. FlyersRights.org dia manolotra ireto vahaolana manaraka ireto mba hampihenana ny isan'ireo korontana mifandraika amin'ny saron-tava amin'ny fiaramanidina:
Ampiharo ny rafitra karatra mavo izay omena fampitandremana an-tsoratra sy fahaizana mandefa fitarainana an-tsoratra amin'ny mpanamory fiaramanidina ho toy ny de-escalation ny mpandeha.
Hamarino fa ny mpanamory dia manara-dalàna ary manamafy hatrany ny fitsipiky ny sarontava.
Avelao hanamora kokoa ny fahazoana madiodio sy ny fahasembanana ara-dalàna amin'ny lalàna mifehy ny sarontava.
Ampiharo ny fepetra fanalefahana COVID lehibe kokoa, ao anatin'izany ny fanalavirana ny fiarahamonina sy ny fanaraha-maso ny mari-pana. Ny fanalavirana ara-tsosialy dia tsy maintsy ampiharina tsy amin'ny fiaramanidina ihany, fa eo am-bavahady, mandritra ny fizotry ny fiakarana, ary amin'ny toeram-pisavana.
Avereno jerena ny fanitarana ny mason'ny TSA amin'ny alàlan'ny fampandrenesana sy fanamarihana ho an'ny besinimaro.
Ny zotram-piaramanidina dia nameno ny mpandeha amin'ny sidina kely kokoa tsy misy elanelam-potoana sosialy, tsy misy fanakanana seza afovoany, tsy misy fetran'ny fahafaha-manao, tsy misy fizahana mari-pana, ary tsy misy fanandramana COVID. Raha manohitra ny saron-tava ny mpandeha sasany noho ny antony ara-politika, ny sasany kosa mahita ny tsy fisian'ny fitandremana fiarovana mahazatra iraisan'ny seranam-piaramanidina (fanalavirana ny fiaraha-monina, fanakanana seza afovoany, fanamarinana ny mari-pana) ary ny tsy fisian'ny fampiharana hatrany ny mpandeha sy ny mpanamory sidina.
Ilaina ny fanenjehana ny bateria rehefa lasa mahery setra ireo tranga ireo. Na izany aza, dia fiakarana mafy sy fanitsakitsahana goavambe ny fahalalahana sivily ny fiantsoana ny heloka bevava nataon'ny Lalàna Patriot “fanelingelenana ireo mpiasan'ny fiaramanidina sy mpanamory fiaramanidina” natokana ho an'ireo mpaka an-keriny ary mandrahona ny mpandeha iray hatramin'ny 20 taona an-tranomaizina.
FlyersRights.org dia nanolo-kevitra ny hisian'ny lalàna mifehy ny sarontava ary koa ny fepetra ara-pahasalamana hafa hiarovana ny mpandeha sy ny ekipazy. Raha ny ankamaroan'ny mpikarakara ny sidina dia mampihatra ny fitsipiky ny sarontava araka izay azony atao amin'ny toe-javatra misy, mpikarakara ny sidina maro no tsy manandrana mampihatra ary ny tenany manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny sarontava.
FlyersRights.org dia tsy hanome ny fihetsiky ny vitsy an'isa mpanampy amin'ny sidina ho an'ny vondrona iray manontolo. Na izany aza, tsy maintsy atao ny fepetra fampiharana amin'ireo mpandeha izay tsy mety manao sarontava, dia tokony horaisina koa ireo mpikarakara ny sidina izay manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny sarontava na tsy miezaka mafy hampihatra ny lalàna. Tsy vitan'ny hoe hamehezana ny tranganà mpandeha an-jatony mahatsiravina ity, fa ilaina ihany koa amin'ny fitohizan'ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny ekipa mpandeha mandritra ny areti-mandringana.